Thunga izigqoko ngezandla
Fashion - oluyingozi futhi into ezingalindelekile: uma shades ehlobene kakhulu abamhlophe kule sizini, ke olandelayo fashion ngeke ithoni ezimnyama, uma namuhla fashionista clog zokugqoka chiffon zabo izinto, khona-ke kusasa bona izixuku ukugijimela esitolo ngoba isikhumba gcwalisa iqoqo lakho ukuhluleka.
Noma kunjalo, kukhona izinto sikhuthazela ukuthi ahlale imfashini ngaso sonke isikhathi, kungakhathaliseki inkathi kanye kwemizwa izikhotha.
Indawo yokuqala lalihlale ngemuva izinto, emelela lokusungula futhi ubuntu, kanye nomuzwa besitayela sakhe.
Uma ufunde ukwenza izigqoko ngezandla zabo, ungakwazi kalula futhi kulula ukwakha nemifanekiso emangalisa, ngokuvumelana nawo wonke fashion Amathrendi zamuva bese uhlale endaweni engamamitha ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Phela, isigqoko yasekuqaleni - iyona touch sokugcina isithombe wanoma yimuphi owesifazane. Hat unika umnikazi wawo charm futhi ikuvumela ukubheka eziyengayo nakakhulu.
Izigqoko ngezandla - akusiwona kanzima. Volumetric futhi ezincane, elula original, wenziwe ngendwangu, crocheted noma spokes izigqoko ngezandla zabo, qiniseka ukuthi ugqozi abantu abakuzungezile injabulo yangempela, bese wengeza kakhulu ukuzethemba kwakho.
Kuyi-Internet, kanye namajenali ezikhethekile enikelwe ukusika futhi ukuthunga, uyobe kalula ukuthole eziningi izikimu, amaphethini ngomumo ngombhalo izincazelo, amathiphu namasu, indlela thunga isigqoko.
Njengoba sazi ukuthi ungasebenzisi eyodwa okwethulwa mithombo yolwazi, esethemba hhayi ukuba Ngokwesibonelo esiyingqayizivele. Mhlawumbe ozozenza ubuchwepheshe zokulungiswa zabo, bese ikhanda lakho kuyoba esiyingqayizivele futhi eyingqayizivele.
Uma uzibheka hhayi kuphela ngenalithi, kodwa futhi umsunguli udlubulunda, zama ukuvimba ukukhanya kungangeni akhele emaphethini izigqoko zakho, usebenzisa izimiso jikelele ubuchwepheshe. Ungathola noma yini oyifunayo: Hat futhi imbali futhi isigqoko la Charlie Chaplin, ngisho inqaba ephakathi ekhanda - yonke into incike amehlo akho engqondo.
Ngo womshini izigqoko oda, okokuqala kunakho konke, kufanele acabangele idatha ngabanye abantu ngoba ozomthuma thunga izigqoko ngezandla zabo: zabo uhlobo umzimba, ubuso ijamo, umbala wamehlo nezinwele, ikakhulukazi izinwele, kanye yobudala ngisho izici zobuntu abanikazi ikusasa cap yakho.
Ngaphezu kwalokho, cap kufanele luhambisane izici izibalo, ngoba uyakwazi zibukeke ukwandisa noma ukunciphisa abantu futhi ungaze ungeze noma ukunciphisa isisindo salo. Ngokwesibonelo, abesifazane-ezikhulayo ongaphakeme zehlukile cap flat ngenhloso komphetho ububanzi, futhi abanikazi ubuso nobuso mncane futhi eside ngeke kube izigqoko okusezingeni eliphezulu.
Izigqoko, ezenziwe ngesandla, kumelwe nakanjani athobele yokubhala izingubo, futhi hhayi kuphela ukhululekile futhi amahle, kodwa futhi sibe isici obusebenzayo: ngangokunokwenzeka, kufanele zikhulisa ikhanda womnikazi wayo e nenkathi ebandayo, ukuze awuvikele elangeni elishisa bhe ehlobo futhi nje kumnandi. Ngombono wethu, ikakhulukazi ezithakazelisayo cap, wenza ingwegwe. Uleyisi obumbene isigqoko uzokwenza ukubukeka kwakho isifazane kakhulu futhi engaqondakali. Ukukhetha hook, akusadingeki ucabange indlela isigqoko, ikakhulukazi uma kungekho umshini wokuthunga. Enough ukuthenga hook nentambo, ukuxhuma umcabango, ngemva ebhekisela amamodeli ekhona kanye imikhiqizo original lace maduzane izakuba ngeyenu. Wathungela ukukhilosha isigqoko kaningi ehlobo, kodwa kungenzeka futhi ebusika izinguqulo. Zonke kuzoncika impahla kanye ukunitha kwabantu.
Thunga izigqoko ngezandla zabo lapho kahle ikhono nokutholakala ukuqoqwa amaphethini, kuhambisana nemicabango akuyona into elukhuni kanje, kodwa kunalokho wokuzilibazisa okuletha ku ikhabethe ka fashionista okukhethekile ngempela futhi amaphethini esiyingqayizivele.
Ikhono ukuthenga ezitolo inthanethi, umlamuleli eNgilandi
"Bedronka" (Poland) - inethiwekhi ezitolo
Cravat amadoda ngoba amadoda stylish.
Zikhethele Nike: izicathulo, efana Cristiano Ronaldo!
Classic ihembe zesifazane mhlophe
"Lermontov" - LCD ngaphandle eduze nedolobha elikhulu
Khuphula isivinini inthanethi. Indlela ukuhlanza cache yesiphequluli sakho
IPhone ukuvinjelwa eRussia. ERussia kungenzeka ukuvimbela iPhone and iPad?
Tea Wezingane "ubhasikidi kagogo": Izibuyekezo
Kungani ungalweli qapha laptop: izimbangela nezindlela zokuxazulula inkinga
I-Volgograd State Institute of Arts and Culture: ikhono nokubuyekeza
Yini okufanele ibe itiye isisindo ukulahleka? izithasiselo kuwusizo futhi kuyingozi e itiye
Umhubhe abadumile ngaphansi kwe-English Channel
Kemer Botanik Resort Ihhotela 4 *, Turkey, Kemer: izibuyekezo, izithombe
Kuphi ngeholide lolwandle: okuhamba phambili izindawo izivakashi Izibuyekezo